Azerbaijan: Tafaverina ny tranonkala malaza — tsy nasiana forum · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 12:57 GMT
Taorian'ny andro maromaro nikatonana, tafaverina ny tranonkala Azerbaijani tsy miankina malaza momba ny adihevitra sy vaovao, Day.az. Na izany aza, mitohy ny fanontaniana tamin'ny nanjavonany vetivety, tsy toy izany kosa ny forum ao amin'ny tranonkala- fantatra amin'ny adihevitra misokatra sy demokratika.
Ampitson'ny nanakatonana ny Day.az, nilaza ny maha zava-dehibe ny forum ilay mpisera Zaur ao amin'ny bilaogy Web Designers.
Manoloana ireo hafatra isan-karazany navela tao amin'ny pejy fandraisan'ny tranonkala taorian'ny fanjavonany, maro amin'ny zavatra hita no mifanohitra tamin'ny nambara teo aloha milaza fa nakatona ny tetikasa manontolo, mbola sahiran-tsaina ireo mpamaky tahaka an'i Arzu ao amin'ny Flying Carpets and Broken Pipelines.
Amin'izao fotoana izao, raha maro no matoky fa tsy hitovy amin'ny taloha intsony ny tranonkala rehefa nambara fa hipoitra indray ny tranonkala, Ali S. Novruzov ato amin'ny Global Voices naneho hevitra tao amin'ny lahatsorany voalohany Frontline Club fa ny tsy fisian'ny forum no fiovana miavaka indrindra.